Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Manaiky ny hitarika ny fitohizan'ny fiaramanidina ny bandy lehibe
Ny fiaramanidina dia mampifandray ny tontolontsika amin'ny alàlan'ny olona mivezivezy haingana sy haingana, manokatra fahafaha-manao toekarena vaovao sy fitaterana sakafo sy entana manerana ny planetantsika. Mampiroborobo ny fahatakarana manerantany ny sidina avaratra, miteraka fifanakalozana kolontsaina manankarena ary manampy amin'izany fiaraha-miasa am-pilaminana izany.
Mandritra izany fotoana izany, ny fiovan'ny toetrandro dia nanjary ahiahy mazava ho an'ny fiarahamonintsika. Ny fiantraikan'ny zanak'olombelona amin'ny toetrandro dia mitaky hetsika amin'ny lafiny maro. Ny indostrian'ny fiaramanidina dia efa mandray andraikitra lehibe hiarovana ny planeta ary hitohy hatrany.
Ny sidina dia mandray anjara amin'ny roa isanjaton'ny famoahana gazy karbonika vita amin'ny olombelona. Ny indostria dia nanohitra ny tenany hampihena ny harato CO2 emissions na dia mitombo be aza ny fangatahana dia an-tongotra sy fitaterana an'habakabaka. Tamin'ny alàlan'ny Air Transport Action Group (ATAG), ny indostrian'ny seranam-piaramanidina no sehatra indostrialy voalohany nanamboatra tanjona kendrena: mampihena ny CO2 emissions hatramin'ny antsasaky ny taona 2005 ambaratonga 2050, ary mba hamerana ny fitomboan'ny net CO2 fandefasana alohan'ny taona 2020. Eo amin'ny làlan-kaleha izahay hanatanteraka ireo fanekena akaiky, ao anatin'izany ny fampiharana ny programa Carbon Offsetting and Reduction Scheme ho an'ny International Aviation (CORSIA) amin'ny taona 2019 araka ny nifanarahan'ireo firenena ao amin'ny International Civil Aviation Organization (ICAO).
Ny Lehiben'ny Teknolojikan'ny Teknolojika an'ny mpanamboatra fiaramanidina malaza manerantany dia samy miasa amin'ny ambaratonga mbola tsy nisy toy izany mba hiantohana ny indostria amin'ireo fanoloran-tena mahery vaika sy ilaina ireo.
Misy singa telo lehibe amin'ny teknolojia amin'ny fiaramanidina maharitra:
Manohy mampivelatra ny famolavolana fiaramanidina sy ny maotera ary ny teknolojia amin'ny fikatsahana tsy an-kijanona ny fanatsarana ny fahombiazan'ny solika sy ny fihenan'ny CO2 entona.
Manohana ny fivarotana lasantsy maharitra ny fiaramanidina. Manodidina ny 185,000 sidina ara-barotra no efa nanaporofo fa ny fiaramanidina androany dia vonona hampiasa azy ireo.
Fampivoarana ny teknolojia fiaramanidina vaovao sy radika vaovao ary ny haingam-pandeha haingam-pandeha hahafahan'ny 'taranaka fahatelo' ny fiaramanidina.
Antony hafa, toy ny fitantanana fifamoivoizana an-habakabaka mahomby sy ny fivezivezin'ny fiaramanidina izay mampihena ny fanjifana solika koa dia manana anjara toerana lehibe tokony harahina. Ny indostrianay dia naneho fandrosoana lehibe amin'ny fampihenana ny tabataba sy ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana ary hitohy izany.
Famolavolana fiaramanidina sy motera ary teknolojia
Nandritra izay 40 taona lasa izay, ny teknolojia fiaramanidina sy motera dia nampihena ny CO2 emissions amin'ny salan'isa isan-taona mihoatra ny iray isan-jato isaky ny kilometatra mpandeha. Ity dia vokatry ny fampiasam-bola R&D manan-danja amin'ny fitaovana, ny fahombiazan'ny aerodynamika, ny famolavolana nomerika ary ny fomba fanamboarana, ny fivoaran'ny turbomachinery ary ny fanatsarana ny rafitra fiaramanidina.
Nandritra ny taona maro, tamin'ny alàlan'ny fikambanana indostrialy sy vondrona iraisam-pirenena, ny vondron'orinasa fiaramanidina dia nanolo-tena an-tsitrapo hihaona amin'ny tanjona kendrena amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fiaramanidina. Ny tanjona napetraky ny Council Advisory for Aeronautics Research any Eropa dia mitaky fihenan'ny 75 isan-jato amin'ny CO2, fihenan'ny 90 isan-jato ao amin'ny NOX ary fihenan'ny 65 amin'ny tabataba amin'ny 2050, raha ampitahaina amin'ny haavon'ny taona 2000.
Mba hanatratrarana ireo tanjona mahery setra ireo dia nifanaraka tamin'ny alàlan'ny ICAO ny fenitra fanaovana fahombiazan'ny solika mba ho ampahany amin'ny fizotran'ny fanamarinana ampiharina amin'ny fiaramanidina rehetra.
Manolo-tena hatrany izahay amin'ny fanatsarana ny endrika misy ny fiaramanidina sy ny maotera mba hanohizana ny làlan'ny fanatsarana ny fahombiazana arak'izay tratra. Mandritra izany fotoana izany dia manamarika ireo fanamby ara-teknolojika goavana eo alohanay izahay ary mety mila mampiditra fomba fiasa mahery vaika kokoa ho an'ny 'taranaka fahatelo'.
Famatsiana ny tetezamita angovo: solika fiaramanidina maharitra
Ny fiaramanidina dia hitohy hiantehitra amin'ny solika ranoka ho loharanon'angovo fototra ho an'ny fiaramanidina lehibe kokoa sy lavitra ho an'ny ho avy. Na eo ambanin'ny vinavinan'ny fanantenana be indrindra momba ny sidina mandeha amin'ny herinaratra aza, ny fiaramanidina ara-barotra isam-paritra sy tokana dia hijanona amin'ny sambo iraisam-pirenena miaraka amin'ny solika jet mandritra ny am-polony taona ho avy. Noho izany, ny fampiroboroboana ny Sustainable Aviation Fuels (SAF) izay mampiasa karbonina voaverina fa tsy karbonina miorina amin'ny fôsily ary mahafeno ny fenitra maharitra maharitra azo itokisana dia singa iray tena ilaina amin'ny ho avy maharitra. Làlana dimy ho an'ny famokarana SAFs no efa nankatoavina hampiasaina, miaraka amin'ny famokarana maridrefy ny iray amin'ireo làlana ireo no efa napetraka. Mino izahay fa ny fanafainganana ny famokarana ny làlana azo iainana ara-barotra, na eo aza ny famolavolana làlan-kaleha fanampiny dia ny lakilen'ny fahombiazana. Ity asa ity dia efa eo am-panatontosana any amin'ireo andrim-pikarohana sy ao anatin'ny orinasa amin'ny sehatry ny indostria isan-karazany. Ny ilaina dia ny fanitarana ny fanohanan'ny governemanta amin'ny fampandrosoana teknolojia, fampiasam-bola amin'ny famokarana solika, ary famporisihana ny famokarana solika manerantany.
Manohana tanteraka ny solika rehetra izahay, izay maharitra, azo refesina ary mifanaraka amin'ny solika misy. Hiara-hiasa akaiky amin'ireo mpamokatra solika, mpandraharaha, seranam-piaramanidina, fikambanana ara-tontolo iainana ary masoivohon'ny governemanta izahay mba hitondra ireo solika ireo hampiasaina amin'ny fiaramanidina miely mialoha ny 2050.
Ny vanim-potoana fahatelo an'ny sidina
Ny fiaramanidina dia eo am-piandohan'ny vanim-potoana lehibe fahatelo, miorina amin'ny fototra napetrak'ireo rahalahin'i Wright sy ireo manavao ny Jet Age tamin'ny taona 1950. Ny vanim-potoana fahatelo an'ny aviation dia ahafahan'ny fandrosoana amin'ny mari-trano vaovao, ny fahombiazan'ny thermodynamic maotera, ny herinaratra sy ny herinaratra-herinaratra, ny fananganana nomerika, ny faharanitan-tsaina, ny fitaovana ary ny famokarana. Ny fiaramanidina lehibe kokoa dia hanomboka handray tombony amin'ny famolavolana vaovao izay hanatsara kokoa ny fahombiazany amin'ny alàlan'ny fitantanana ny dragona sy ny fanaparitahana propulsion amin'ny fomba vaovao. Ny fitaovana vaovao dia hahafahan'ny fiaramanidina maivana kokoa hanatsara ny fahaizany.
Faly izahay amin'ity andiam-piaramanidina fahatelo ity ary, na dia samy manana ny fomba fiasa aza ireo orinasa solo-tena rehetra, dia voatosiky ny fahatokisana ny fandraisany anjara amin'ny anjara asan'ny fiaramanidina amin'ny ho avy maharitra isika. Mino izahay fa ny fiaramanidina dia miditra amin'ny vanim-potoana mahaliana indrindra hatramin'ny fiandohan'ny vanim-potoana Jet. Ity vanim-potoana fahatelo ity dia mampanantena fiovana miabo amin'ny fiainana manerantany - ary vonona izahay hanao izany.
Fiantsoana hanao hetsika: Andao hiara-hanao ity ho avy ity isika
Mamiratra ny hoavin'ny fiaramanidina. Na eo aza izany, ankoatry ny ezaka goavana ataon'ny sehatra misy anay, miankina amin'ny fanohanana miharihary avy amin'ny mpanao politika, ny mpandrindra ary ny governemanta miara-miasa amin'ny fanatanterahana ireo tanjona ireo koa izahay.
Tsy maintsy misy ny fanoloran-tena ho an'ny daholobe sy ny tsy miankina hametraka fananganana fitsipika mifehy tsara hiatrehana ireo olana vaovao mifandraika amin'ny teknolojia fiaramanidina vao misondrotra sy hanomezana fanampiana ara-toekarena ilaina amin'ny varotra SAF miparitaka be. Hitanay ny fandrindrana midadasika kokoa sy lalindalina kokoa amin'ny alàlan'ny ICAO hanamorana ny fomba fiasa miray amin'ny lalàna mifehy miaraka amin'ny rafitra nasionaly mifehy sy manara-penitra. Anisan'izany ny US Federal Aviation Administration, ny European Aviation Security Agency, ary ny sivily Aviation Administration of China, Transport Canada, ANAC of Brazil sy ny hafa.
Amin'ny maha CTO an'ny indostria anay dia manolo-tena hitarika ny faharetan'ny fiaramanidina izahay. Mino an'ity indostria ity izahay sy ny anjara asany amin'ny fanaovana izao tontolo izao ho toerana mazava sy azo antoka kokoa. Mino mafy koa izahay fa manana fomba hanatanterahana ny fiaramanidina maharitra ary handray anjara lehibe kokoa amin'ny vondrom-piarahamonintsika manerantany.
Chief Technology manamboninahitra